Saturday July 25, 2015 - 01:21:08 in Wararka by Web Admin
2- U akhrinta buugta iyo u sheekayntu waa muhiim: U bilow inaad ilmaha buugta ciyaalka u akhrido; iyaga oo yarna u sheekayso, si ay luuqadda iyo dhagaysiga u bartaan. Inaad horay ugu bilowdo ayaa aad u haboon. Buug u akhrinta caruurta waxa ay ilmaha
7- Caruurtu dadka waawayn ha la fariisato: Waxaa haboon in caruurtu ay dadka waawayn ku dhex jiraan, gaar ahaan marka muxaadarooyinka Islaamiga ah la qaadanayo. Nabigu (Nabadgalyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee), waxuu inta badan caruurta fariisin jiran safka hore marka uu dadka la hadlayo.
23/07/2015 - 17:26:52
06/07/2015 - 02:53:48
Hay'ada Socdaalka Norway oo soo saartay Macluumaad kusaabsan Soomaalida magangalyo doonka ah ee iska dhiibaya dalka Norway.
01/07/2015 - 02:07:31